Omama abaningi ujwayelene nalesi simo, lapho ingane emini ekushintsheni izinga lokushisa komzimba. Spikes kungaba phakathi amabili ngisho degrees ezintathu. Phawula ushintsho emzimbeni wengane Kulula kakhulu. Ekuseni lolu sana asebenzayo futhi bube buhle, kepha ngemuva kwamahora ambalwa nje ekubeni ucobekile futhi bengenandaba. Kungani gxuma lokushisa ingane?
Amazinga kuyinto inkomba umzimba. Ngokuvamile, nokwenza kwayo akumele leqe uphawu 37 degrees. Usuku lonke, bangase hlanhlatha liye phezulu noma phansi. Amanani Ubuncane uqobo awela ekuseni, futhi sifinyelele zinamandla at amahora 17.
lokushisa izinkomba ukushintsha kungenzeka kubangelwa kokubili izinqubo bokuphila emzimbeni wengane, kanye sokugembula. Kuyinto nalezi zindlela ezimbili Ibeke izizathu kuzuba abukhali. Ake sicabangele ngasinye salezi zimo kabanzi.
Ushintsho lokushisa komzimba emini uvame lihlotshaniswa nesimo bokuphila izidumbu. Ukuqalisa kubangela ukwenyuka izinkomba zabo ukusebenza. Uma silele, lapho umzimba usesimweni lokuphumula, ukwehla kwezinga lokushisa namagugu. Ngakho-ke weqa ukusuka degrees 36 kuya 37 emini kumelwe libhekwe njengelingcwele okuhlukile kuyinsakavukela.
Ngaphandle ubuthongo nokuvuka sikhathi, kungenzeka lokushisa ekushintshashintsheni kubangelwa ezinye izinqubo. Lezi ochwepheshe zihlanganisa:
umsebenzi asebenzayo ngokomzimba;
Kuzo zonke lezi zimo, ingane kokwenyuka kwezinga lokushisa ukuze subfebrile amamaki. Oluthile lokwelapha noma yokuphila izinguquko azidingeki, njengoba ukwanda kungenxa isimo bokuphila we umzimba.
Omunye iziyaluyalu ezivamile ezinganeni ubudala zasenkulisa kuyinto thermoneurosis. Kulesi simo, ingane ibonakala imfiva, kodwa izinga lokubanda ingeqi uphawu 37.5 degrees. Imiphumela egazi noma omchamo ungabonisi kwezinso abalulekile emzimbeni.
Phakathi odokotela sezizathu ezinkulu thermoneurosis shayela imizwa zokuziphatha ingane. Zingase ne-hambisa, ubuhlobo ezimbi nezingane nothisha enkulisa. Imizwa engakhi ngohlelo autonomic avuse ukwahluleka thermoregulation zomzimba. Ngenxa yalokho, constriction abukhali futhi vasodilation livela imfiva. Uma izinga lokushisa Ugxumela ingane, futhi lo dokotela kuqinisekisa uphethwe "thermoneurosis" imithi yokwelapha edingekayo. Nakuba abazali ayivezi imbangela sifo kweqiniso futhi ngeke ayiqede inkinga yokuntuleka ke, lezi zimpawu uzobe ephelezelwa ingane. Kulesi simo, ingane kwanele ezenza engadini kanye ekhaya.
Intsha futhi kufanele ubhekane nalesi thermoneurosis mkhuba. Qinisekisa le zokugula kungenzeka kuphela ngokususa ngaphandle izizathu sina esengeziwe lokushisa ekushintshashintsheni. Ezimweni ngabazeka, abantwana bakwa ingane kuboniswe ubambe aspirin test. Kucondza antipyretics kokuthola, kulandele okwashiwo ngezimo zesiguli. Nge ukusebenza esigculisayo esibhedlela kulandela imizuzu engaba ngu-40, sikwazi ukukhuluma thermoneurosis. Ukwelashwa kulokhu kuhlanganisa sedatives kokuthola, aphoyintimenti izinqubo okubuyisela.
izici ngamunye umzimba
ingane ngamunye ungaba "umuntu" izinga lokushisa lapho bakhululeke. Kulula ukunquma ngu yokulinganisa phezu izinsuku ezimbalwa ezifundeni ezehlukene (ngaphambi, ngesikhathi sokulala futhi emva uvuka). Ungakha ngisho isheduli lokushisa, okuzoba zonke izinguquko ebonakalayo. Kuyaphawuleka ukuthi ngezinye izikhathi izibalo ziyahlukahluka kuye izici zangaphandle: usana zihambisana ngengubo, sisesimweni ejabule, noma usanda kudliwa. Ngokwesibonelo, lapho usana kuyinto evamile 37 noma ngisho 38 degrees. Uma lonke ingane Ungazihluphi ukwethuka akudingekile.
lokushisa sokugembula kubangela jumping
Uma izinga lokushisa Ugxumela ingane emini, nge kokuphakama esiphezulu degrees 37.5 noma ngaphezulu, emi unogada. Izimbangela lesi sifo yilezi:
izinqubo okuvuthayo phakathi nomzimba.
izifo ezibangelwa amagciwane. Lezi zihlanganisa izifo ezibangelwa amagciwane, namathansela, sibi zokuphefumula igciwane lohlobo nokunye.
Izifo kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, kanye ukushayisana ipheshana wokugaya ukudla.
Uyahluleka uma elwa nokuphuza izifo ezingamahlalakhona.
izifo ezibangelwa amagciwane zinezikhathi isithombe esithile emtholampilo. Ngakho ungaphuthelwa nzima kakhulu. Ngokuvamile, ingane ugibele lokushisa kanye amakhala yisisu, ezimweni ezingavamile, kungase kube esephule kwesitulo. Uma-SARS kanye angina ziphathwa ngokushesha, ezinye izifo ebhalwe ngenhla ngokusekelwe eBhayibhelini zidinga ukwelashwa ngendlela eyingozi kakhulu. Kunoma ikuphi, umntwana kufanele siboniswe wezingane. Ngemva luhlolo egcwele isiguli udokotela encane bazokwazi ukhethe ukwelashwa okuphumelelayo kakhulu.
Kungani izinga lokushisa Ugxumela izinsana?
Cishe ezinyangeni eziyisithupha emva ukuzalwa komntwana uqala usike ubisi wakhe amazinyo. Le nqubo engokwemvelo yokufunda ngokuvamile uhambisana uchungechunge izimpawu, kukhona kuzuba e lokushisa kuhlanganisiwe. Kwezinye izingane, kungaba ukufinyelela uphawu 38.5 degrees, esithinta impilo jikelele kanye nemizwelo. Ngesikhathi kuqhuma amazinyo nezinsini avuvukele, ngenxa yalokho, izinga lokushisa likhuphuka.
Yini abazali okufanele uyenze? Odokotela bezingane hhayi Kunconywa engqongqoza lokushisa aze afinyelele ezingeni esibucayi (degrees 38). Ukuze ulwe impendulo ukuvuvukala kungenziwa nivame nge gingival yokugcoba ethize opholile kanye lwaluyophola. Futhi, odokotela bavame belulekwa ukubeka imvuthu kuya webele.
Amazinga aphansi e ingane kuze kube unyaka kuyinto evamile, uma imingcele wawo ushintshwe ngaphakathi 1-1.5 degrees. Kuphela umzimba ngayo lapho usana iqala ukuzivumelanisa nezimo zemvelo, kanye izindlela thermoregulatory angakafakwa ekugcineni isilungisiwe. Ngakho-ke, basengozini hypothermia ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi emgwaqeni, lapho abantu abadala abazona kubalulekile.
Okunye izimbangela asymptomatic lokushisa kuzuba
Umkhuhlane nje ovamile, inkukhu Pox, umkhuhlane, inyumoniya - zonke lezi zifo zinezikhathi ukwanda lokushisa. Futhi, ukubukeka kwabo aluphumeleli ngaphandle kokuphula situlo, ukuqubuka, isicanucanu nokuhlanza.
Uma ingane imigqomo lokushisa ngaphandle izimpawu, imbangela oscillation kunzima. Kulokhu, ngeke akwenze ngaphandle kosizo lukachwepheshe ofanelekayo. Cabanga izimo ezivamile.
Ukuba khona nomzimba angaphandle emzimbeni. Ngokuvamile, endimeni yakhe njengoMholi khulumela izwibela abavamile. Abazali ngokushesha ukuqeda inkinga, ukucobeka kuyoba ngokushesha.
Amazinga aphansi e umntwana ngokuvamile kuwubufakazi amavithamini.
Yokungezwani komzimba. Abaningi zijwayele ukuthi hlobo yokusabela kuya umkhiqizo othile selivela ukuqubuka noma sneezing. Nokho, lokhu akusho ngaso sonke isikhathi kwenzeke. Ngokuvamile komzimba imfiva. Ngokuyinhloko, ukusabela ngaleyo ndlela uboniswa nemithi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba isicelo sabo kufanele uthintane imiyalelo.
Imijovo yokugoma. Ezinye izingane ziyakujabulela ukuzivumelanisa imijovo angaliboni, kuyilapho abanye - lokushisa ukweqa. Ingane ne izimpawu nezinye izifo uma kungavela. Lesi sibonelo kufakazela waphinda ukuthi kuba ngokuphelele ezifanayo ukuze ngamunye nezinye izinto eziphilayo ezikhona.
Lezi izimbangela okungazelelwe lokushisa kuzuba ezinganeni kuyizinto ezivamile, kodwa akubona bodwa. Ngokunembile ukunquma etiology ngalesi sifo kungase udokotela kuphela.
Indlela ukusiza imvuthu?
Okokuqala nokusemqoka, abazali kufanele sizame ukuqonda ukuthi kungani lokushisa Ugxumela ingane. iminyaka engu-3 noma isivele engu-13 ubudala - nhlobo umehluko. Uma kwezimbangela ezikhona kubalwa bokuphila ngokwemvelo, akudingeki ukubhekana nazo. Ezimweni ezingavamile, yokulungiswa isithombe impilo yengane, ushintsho kwenkundla noma imvelo. Uma izinga lokushisa imeqo kubangelwa yokungezwani komzimba, kumele siqambe sicasulwa.
Uma usola ukuphazamiseka sokugembula zidinga bezokwelapha abanekhono. Kulokhu, abazali kufanele ngokushesha ubize iqembu kwabasebenzi bezempilo abaqeqeshiwe. Udokotela afika endlini, Yini elandelayo?
Ukuletha phansi ukushisa, izingane Livamise "ibuprofen" noma "paracetamol". Izingane abakwazi ukudla bebodwa, ukwenza shot nge antipyretic. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuzihlonipha medicate ngaphansi kwezimo kumele ube njalo. izidakamizwa abaningi engabelwe abadala, nhlobo izingane. Lezi zihlanganisa izidakamizwa ne Metamizole futhi "aspirin" futhi "Analgin".
Ngemva kwalokho, umntwana ngokuvamile esibhedlela futhi ekunike reception ngesikhathi wezingane wendawo. Ukuze acacise izizathu kuzuba abukhali izinga lokushisa edingekayo ukuze uthole ukuxilongwa ngokuphelele. Kujwayele kuhlanganisa ukuhlolwa kwegazi kanye nomchamo, ECG, ultrasound. Ngemva kokuthola lo isithombe esigcwele emitholampilo ye yokwelapha wezingane nesineke Uqoka amancane kunikeza izincomo ukunakekelwa. Kuye isimo, onguchwepheshe sinquma imithi elwa namagciwane, ama-hormone, antihistamine namanxusa eqeda ukuvuvukala.
Iseluleko uDkt Komarovsky
wezingane bodumo Komorowski, lapho uMkhandlu walalela eziningi abazali, alikukhuthazi ngaphambi kwesikhathi ukudubula phasi izinga lokushisa ezinganeni. Ngokubona kwakhe, kufanele aqondiswe isimo isiguli ezincane kule ndaba. yokuzwela ejwayelekile lokushisa kuzuba ebonisa ukuthi umzimba eba amasosha omzimba imvuthu. Ngakho uzama ulwe amagciwane. Lapho amajaqamba nezinye izimpawu ezisikisela Yiqiniso sokugembula yenqubo, kunesidingo esiphuthumayo ziqala ukubhekana kangcono nale nkinga.
Indlela ngehlise lokushisa? Okokuqala, kufanele kuncishiswe ukukhiqiza ukushisa umzimba wengane. Unganikezi ingane yakho ukudla okushisayo kanye itiye. Noma yimuphi uketshezi ongena umzimba, kufanele lizwakale linemfudumalo noma kancane selehlile. Uma ingane liveza umsebenzi engakaze ibonwe, kubalulekile ukuzama ukunqanda kuye phansi. Ngu ngezenzo zayo, kuphela eshubisa isimo.
Kuyadingeka ukwandisa ukudluliswa ukushisa. Ngenxa yalesi ikamelo, umntwana kufanele ngezikhathi pholisa. Uma unesikhathi imfiva, kufanele ususe zonke izingubo ngokweqile. Uma ingane esindwa imfiva, kungaba qedani futhi ukunika ingane yakho ijusi. Warm noma cool, ukuphuza uketshezi oluningi - ukhetho best ukuphehla lokushisa.
A kuyanda lokushisa ebuntwaneni kungadalwa izinto bokuphila sokugembula. Ukuze sithole omsakazo kuphazamiseka kungenzeka udokotela kuphela ngesisekelo imiphumela yokuhlolwa. izizathu bokuphila ngokuvamile awadingi oluthile lokwelapha ezingeke ishiwo sokugembula. Kunoma yikuphi, uma ungazizwa kahle kufanele bonana nodokotela yezingane. Namuhla inkonzo "ezovakasha" akuzo zonke zezempilo, kuhlanganise khulula.